Fahasalamàna · Jona, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fahasalamàna · Jona, 2012
Tantara mikasika ny Fahasalamàna tamin'ny Jona, 2012
Shina: Noteren'ireo Mpiasam-panjakana Mpanao Kolikoly Hanala Zaza Nefa Efa Tara Loatra
Azia Atsinanana 29 Jona 2012
Nieli-patrana manerana ny fampahalalam-baovao sosialy sy ny sehatra fitorahana bilaogy kiritika ka niteraka fenehoan-kevitra an-katezerana ny sarinà vehivavy iray tao amin’ny faritanin’i Ankang Shaanxi, ao Shina noterena hanala zaza tamin’ny fotoana efa tara. Mpitranga matetika ny karazan-javatra toy izao saingy tsy vitan’ny lalàna sinoa ny manafay ireny fihetsika ireny. Izany no antony mahatonga ireo mpanankarena mandao an’i Shina.
Amerika Latina 18 Jona 2012
Azia Atsinanana 14 Jona 2012
Ny 7 May 2012 dia nanambara ny sampandraharaha Koreana misahana ny Sakafo sy ny Fanafody fa ny fanafody fampiasa maika ho fisorohana ny vohoka, fantatra amin'ny hoe morning-after pills, na 'Pilina raisina ny ampitson'iny' dia ho azo jifaina malalaka. Na izany aza, ireo pilina atelina ho fisorohana vohoka izay namidy malalaka teo aloha dia ilàna taratasim-panafody. Ho an'ny tanora dia mbola ilaina hatrany ny taratasim-panafody ho an'ireo pilina fampiasa maika. Niteraka resabe teny anivon'ny aterineto ireto fiovàna tampoka teo amin'ny fepetra fomba fahazoana fanafody ireto
Afrika Mainty 10 Jona 2012
Mbola an-dàlana tanteraka ny fametrahana rafitra fiahiana ara-tsosialy ho an'ny ankamaroan'ny firenena aty Afrika. Samy nifidy rafitra iray manokana mifanaraka amin'ny kolotsainy ny governemanta afrikana tsirairay, izay azo lazaina ho nahomby amin'ny ampahany ihany, saingy ny rehetra dia miara-mahatsapa ny filàna ny fiarovana, na faran'izay kely aza, ho an'ireo tena mponina marefo ao aminy. Resahan'ireo manampahaizana manokana amin'izany ny vokatra azon'ireo rafitra efa napetrakaho fiahiana ny ara-tsosialy ao Afrika :